March 5, 2021 Xuseen 7
Ciidanka difaaca Puntland ayaa duleedka magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ku soo bandhigay dagaal yahano katirsan ururka Alshabaab iyo maxaabiis ay habeenimadii xalay kala bexeen xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso.
Ciidankaan oo isugu jira PSF, PMPF iyo kuwa madaxtooyada Puntland ayaa waxa ay goob banaan ah oo ku taala buuraleeyda Laag ku soo bandhigeen maxaabiistaan oo gaaraysa 25 rag ah iyo dhowr ruux oo haween ah.
Saraakiisha ciidanka hoggaaminaysa ayaa sheegay inay dhowaan soo bandhigi doonaan malayshiyaadkaan, hubkoodii iyo qaar kamid ah raggii hoggaaminayey oo laga xog waraysan doono ciddii ka dambasay weerarkaasi iyo halka ay kujeedeen.
Reer bari waa gun guryahooda gubaya.
reer BARI waxa ku badan inan gumeedyo cadaw ku ah puntland walaahi in farmaajo iyo shabaab xukumo ay ka jeclyihiin in nin rer puntland ah xukumo
Jo Goh says:
Inan gumeed waxa lagu yaqaan marka wax dhacaan ayuu sida habraha baroortaa, Adeer reer Bariga aad sidii inan hinaastay u eedaynso sow kuwa maalin kast dhiigooda u huraya difaaca dalka ma aha?, kuwa xalay difaac ku dhintay sow reer Bari uma badnayn?, marka argagixisadu weerarada ka geysato Gaalakcyo iyo Garoowe cid reer Mudug iyo Nugaal si gaar ugu eedaynsay ma aragtay? war nedelyow sida hablaha u baroorane ee dalka difaaciisa dhinac ka gal ama iska aamus.
Ii keena gacantayda soo galiya MIISHAARTII WAA LA’KEENAY AAN SURKA KAGA JARI LAHAA. DADKA REER PUNTLAND DIYAAR GAROOBA QOFKASTA DHAGAXIISA HA DIYAARSADO. Markaan SURARKA MIISHAARTA OGA JARO TABEELE baan surin DHAGAX U HOREEYA WAJIGA ANAA KU DHUFAN INSHA ALAAH. NO MERCY NO MORE SHAATIGA SHAYDAAN KA
Don’t start something that you can’t 🛑 stop it. Puntland dadkeeda xumaan iyo dagaal loogama macaasho. Sababta loo dhisey ayaa aheyd in laga nabad helo, ayaduna ay nabad hesho. Waa kuwaa kuwii xaley weereka ahaa, haataan maxaabiista ah. Ismaqiiqe farmaajo caawa seexan mayo maadaama ay socon wedey wixii uu rabey. Afka ayaa buud laga gashey inan gumeed jiran oo dhan. عاشت نونتلاد شعبا وارضا
War dhibaatada Puntland waxaa ka mas’uul ah kuwa qabyaalado indha tirtay oo aan kala garan karin,waxa u sabab ah in wax walba oo haykal dowladeed ahaa ay Puntland oo shaqayn waayaan.
Intan badan kuwa waxa dhabta ah ka leexda ,xaajadabrunta ah ayey meel kale u leexiyaan.
War iyaa Baarlamaan kii Puntland baabi’yey.?
Yaa Dakadii Bossaso DP World heshiis ku laaluush la galay,waa Gaas iyo Deni iyo xildhibaanada golaha la soo magacaabo ee Puntland ee laaluush qaatayaasha ah.
War shac Puntland been looma sheegi karo.
Deni iyo xulufadiisa waxa ay badeen Puntland ayaa mudo u baahan in ka saxo.
Dadka reer Puntland waxa haysta dhibaatooyin mudo soo socday oo leh dhaqaale,caafimaad,waxbarasho,shaqo la’aan,cadaalad daro,amaankii oo sii xumaaday,musumaasuqa oo ah noqday mid meel walba ee maamulka Puntland saameeyey.
Gunaanadkii,inta hab beeleed aasaas u yahay hab maamulka dowlad goboleedka Puntland in san guuldarooyinkan marna laga baxayn.
Waa in hab ka duwan kan lago fashilmay kago bedelo mid shacabka Puntland sy iyago leeyihiin talada cida noqonaysa madaxdoo, ( Governor) Iyo mida degaanada wa in shacabka Puntland ay si toos ah u doortaan.maarkaasi waa laga adkaan argagixisada al shabaab.
Puntland guul,horumar,nabad iyo cadaalad loo Siman yahay.
Gun iyo Geeso xunba waa lagubayaa.